लगानी सम्मेलन र विप्लव आन्दोलनः विदेशीहरुले नेपालमा गर्लान् त लगानी ?
अर्थ - बाणिज्य , अन्तर्वार्ता , राजनीति
पासाङ्ग ठकुल्ला बिहिवार, चैत्र १४, २०७५, १७:११:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा लागानी सम्मेलन हुदैँछ । लगानी सम्मेलनबाट देशमा ठुलो लगानी भित्र्याउने सरकारको तयारी छ । सम्मेलनको तयारी पनि पुरा भएको छ ।
७७ परियोजनामा ३४ खर्ब ६८ अर्ब बराबरको लगानी भित्र्याउने योजना सरकारले बनाएको छ । सम्मेलनमा ४० देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्ड लगायत ६०० बढी लगानीकर्ताको सहभागी हुने बताइएको छ ।
नेपालमा लगानीको वातावरण भएको भन्दै सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्दैछ । तर यतिबेला सरकारले विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न भन्दै नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
विगत लामो समयदेखि 'विप्लव' कार्यकर्ताले विदेशी लगानी रहेको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र अरुण तेस्रोमाथि हमला गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय प्रतिबन्धित 'विप्लव' नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु पक्राउ पर्ने सिलसिला जारी छ ।
यता विप्लवले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको प्रतिबन्द विरुद्ध बुधवारदेखि २४ गतेसम्मको संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । यही बीचमा सरकारले काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिलेको विकसित राजनीतिले लगानी सम्मेलनमा प्रभाव पार्ने तर्क गर्छन् । मुलुकको राजनीति स्थिरताको तर्फ गईनसकेकोले विदेशी लगानी भित्र्याउन विश्वासको वातावरण तयार भइनसकेको उनी बताउँछन् ।
'लगानी भित्र्याउन विश्वासको वातावरण आवश्यक छ । नेपाल भित्रका लगानी कर्ताहरुलाई लगानी गर्न आस्वस्त गर्न सकेको अवस्था छैन,' उनले भने, 'एउटा विश्वासको वारतावरण र स्थिरताको वातावरण तर्फ मुलुक गएको छैन । सरकार स्थिर छ । तर मुलुकको राजनीति अवस्था चाँही स्थिरताको तर्फ गएको छैन । सरकारले हरेक ठाउँमा विभाजित कामहरु मात्र गरिरहेको छ ।'
सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय राजनीति ठीक ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेकोले राजनीतिक स्थिरता आउन नसकेको उनको भनाई छ । 'लगानी भित्र्याउन सरकारले पहिला आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिलाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो । त्यो हुन सकेको छैन,' उनले जनतापाटीसँग भने, सरकारका गतिविधिले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न लागेको महसुस हामीले गरेका छौ । यस्तो अवस्था बारेमा विदेशीहरु अनभिग्य होलान भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारले जुन एउटा वातावरण बनाउने पर्ने हो । त्यो विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको मेरो विस्लेषण छ ।'
यस बिषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ । यता फेरी विप्लप नेतृत्वको पार्टीलाइ प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसलाइ कसरी हेर्नु भएको छ ?
लगानी सम्मेलन एक पाटो हो । र विप्लव समुहको प्रतिबन्ध अर्को पाटो हो । तर कुनै न कुनै रुपमा मुलुकमा अस्थिरता छ । यस्ले विश्वासको वातावरण बनाउन अप्ठेरो छ, भन्ने कुरा कुनै न कुनै रुपमा त्यतातर्फ इंगित गर्छ । जहाँसम्म लगानीको कुरा छ । मुलुकमा अहिले, खास गरेर आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जुन गतिले मुलुक अगाडी बढ्नु पर्थ्यो त्यो गतिले मुलुक अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
एक शब्दमा भन्नु पर्ने हो भने हामीले एक वर्ष नारा लगाएर मात्र समय खेर फालेका छौँ । आर्थीक फड्को मार्ने कुनै पनि काम अहिलेको एक बर्षमा हुन सकेका छैन । रुटिङ्ग वर्कभन्दा अरु काम पनि हुन सकेको छैन ।
नेपाल भित्रको लगानी कर्ताहरुलाई वा निजि क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न नसकिराखेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अब प्रचार प्रसारले मात्र कति लगानी आउला र त्यसले कति प्रतिफल देला ? यो चाँही प्रश्न चिन्हका रुपमा छ । तर लगानीको वातावरण मुलुकमा छ । त्यसका निमित्त सरकारकाप्रती जुन विश्वस्नीयता हुनु पर्ने हो । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा त्यो विश्वास्नीयता नभएको महसुस मैले गरेको छु ।
जो लगानी गर्न आउने लगानी कर्ताहरु छन् । उनीहरु कुनै परोपकार गर्न आउनले त होइन् । उनीहरु यहाँबाट त्यस्को प्रतिफल लिएर जान चाहन्छन् । र यहाँ सुचारु रुपमा आफ्नो काम गर्न चाहन्छन् । त्यो वारतावरण अहिले बनिसकेको अवस्था छैन ।
नेपालको वरतमान राजनीतिले विदेशी लगानी कर्ताहरुलाइ नेपालमा लगानि गर्ने विषयमा कस्तो प्रभाव पर्छ होला ?
विदेशी लगानीकर्ताहरुलाइ उत्साहीत हुने किसिमको कुनै वातावरण बनेको छ भन्ने महसुस गरेको छैन । प्रचार प्रसार केही भएको छ । यसैलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । विश्वासको वातावरण निर्माण भएर लगानी आइहाल्ने परिस्थितीको बारेमा उत्साह र विस्वासको वातारण बनिसकेको अवस्था छैन । किनभने स्वदेशी लगानी विस्वासमा लिएर स्वदेशी लगानीलाई प्रवाह गर्न नसकिराखेको अहिलेको अवस्था छ । अहिले स्वदेशी लगानीकर्ताहरु 'वेट एण्ड सि' को रुपमा बसिरहेका छन् ।
यस अघि पनि राजनीतिक अस्थिरताले लगानीको वातावरण नबनेको विश्लेषण गरियो । फेरी फरक राजनीतिक गतिविधि बढेको समयमा यो सम्मेलनले सार्थकता देला त ?
नेपाली जनता अहिले 'सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल' नाराबाट आकर्षित भए र त्यस अनुसारको अभिमत अहिले बनेको सरकारलाई जनताले दिए । तर सरकारले त्यो अभिमत अनुसार काम नगरेर लोकतान्त्रीक पद्धति माथि नै प्रहार गर्ने किसिमको कामहरु गरी राखेको छ ।
त्यसले गर्दा एउटा विस्वासको वारतावरण र स्थिरताको वातावरण तर्फ मुलुक गएको छैन । सरकार स्थिर छ । तर मुलुकको राजनीति चाँही स्थिरतातर्फ गएको छैन । सरकारले हरेक ठाउँमा विभाजित कामहरु मात्र गरिरहेको छ । र प्रधानमन्त्रीमा आफै शक्तिशाली हुने भोक मात्र जागेको छ । यस्ले धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह अहिले नेपाली जनताहरुमा उठिराखेको छ ।
उसोभए लगानी कर्ताहरुलाइ नेपालमा लगानी गर्ने वातारवारण छ भनेर विश्वस्त पार्न सरकारले के गर्नु पर्थ्यो ?
त्यसको निमित्त सरकारले पहिला त आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिलाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक एउटा परिपक्क अपोजिसनमा छ । उसलाई पनिसँगै लिएर अघिबढन सकेको अवस्था छैन । सरकारको गतिविधिलाई हेर्ने हो भने हामीले नै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न लागेको महसुस गरेका छौ । मुलुकलाई दूई तिहाइको बलमा यो सरकार अधिनायकबादतर्फ उन्मुख हुन खोजिराखेको छ । यस्तो अवस्थाको बारेमा विदेशी अनभिग्य होलान भन्ने मलाई लाग्दैन ।
विकसित राजनीतिलाई मध्यनजर गरेर तपाईको पार्टीको कस्तो धारणा छ ?
लगानी सम्मेलनलाई हामी सकारात्मक रुपमा लिन्छौ । यस्ले मुलुकलाई प्रतिफल दिन सकोस भन्ने हाम्रो शुभकामना छ । तर त्यस दिशामा सरकारले जुन वातावरण बनाउन पर्ने हो । त्यो विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको मेरो विस्लेषण छ ।
पासाङ्ग ठकुल्लाबाट थप
जनताको चाहनाअनुसार विकसित हुँदै तुल्सिपुर जहाँ कर तिरिन्छ त्यहाँ विकास हुन्छ । जनताले तिरेको करको सदुपयोग वा दुरुपयोग के हुन्छ त्यो विषायमा खोजिनिति गर्नु पर्छ । कर नतिरिकन देशको बिकास गर्छु भनेको दिवा सपना हो । त्यो सम्भब पनि हुदैँन । नयाँ संविधानले करका दायराहरु, प्रणालीहरुमा केही फराकिलो हुदाँ कन्फुजन भएको हो । जनतामा त्यो धेरै रहदैन । समाजबाद निर्माण गर्ने भनेकै प्रगतिसिल कर प्रणालीका आधारमा तय गर्ने हो । मंगलवार, फाल्गुन २१, २०७५, १६:५९:००
आउँदो चुनावमा दुई तिहाइ मत ल्याउने प्रधानमन्त्रीकाे दावी शुक्रवार, जेठ ३, २०७६, १०:३७:००
प्रदेशको नाम र राजधानी : प्रदेश २ थप अन्योलमा बुधवार, माघ १६, २०७५, ११:५६:००
नयाँ पत्रकारले लाईसेन्स परिक्षा पास गर्नुपर्ने
‘राजनीतिक दलहरु म्याद गुज्रेको औषधीसरह’ - डा. सिके राउत
सभामुख सापकोटाले नेकपाबाट दिए राजीनामा